Nyefee na Doha, Abu Dhabi, Dubai: Nhọrọ ndị njem ụgbọ elu doro anya | Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu
Home » Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu » Nyefee na Doha, Abu Dhabi, Dubai: Nhọrọ ndị njem ụgbọ elu doro anya
Nyefee na Doha, Abu Dhabi, Dubai: Nhọrọ ndị njem ụgbọ elu doro anya
Qatar na ọdụ ụgbọ elu ya bụ Doha Hamad International gabigara oge na-agaghị ekwe omume n'oge nnọchibido nke UAE, Saudi Arabia, Egypt, na Bahrhain. Site na nnukwu ego na ihe ụgbọ elu, ọrụ na mma Doha jisiri ike mee ihe agaghị ekwe omume - ụdị Qatar.
Qatar Airways, Etihad na Emirates na-asọmpi ụwa maka ndị njem na-agbanwe ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri ha na Doha na Qatar, Abu Dhabi na Dubai na UAE.
Na agha a ga-abụ njem njem njem kachasị na Middle East, nyocha ọhụụ, nke nwere data ntinye akwụkwọ zuru oke na ọgụ zuru oke n'ụwa, na-ekpughe na ọkara mbụ nke 2021, Doha jidere ma jikọtara ụzọ na Dubai.
N'oge 1st Jenụwarị ruo 30th June, olu nke tiketi ụgbọ elu enyere maka njem site na Doha dị 18% karịa ka ọ dị site na Dubai; na mmekọrịta ahụ yiri ka ọ ga-aga n'ihu. Ntinye akwụkwọ ugbu a maka ọkara nke abụọ nke afọ site na Doha dị 17% karịa Dubai.
Ná mmalite nke afọ, okporo ụzọ ụgbọelu site na Doha dị na 77% nke Dubai; mana ọ ruru ngwa ngwa 100% na nke mbụ n'ime izu malitere 27th Jenụwarị.
Isi ihe kpatara omume a bụ mbuli elu na Jenụwarị nke mgbochi nke ụgbọ elu na Qatar, nke ndị Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, na UAE tinyere na June 2017, bụ ndị boro Qatar ebubo na ọ na-akwado iyi ọha egwu - ebubo Qatar kwetasiri ike. Ozugbo amachibidoro ya, mgbochi ahụ nwere mmetụta na-adịghị mma ozugbo na ụgbọ elu na-esi na Doha. Dịka ọmụmaatụ, a manyere Qatar Airways ịpụ ebe 18 na netwọkụ ya. Na mgbakwunye, ụgbọ elu dị iche iche site na Doha tara ahụhụ ogologo oge, ebe ụgbọ elu ga-eme njem iji gbochie ikuku ikuku ikuku. Ebe njem ya na onye isi ụgbọelu ya, Qatar Airways, azaghị mgbochi ahụ site na mbelata; kama, o mepere uzo ohuru iri abuo na ano iji wepu ihe gaara aburu ugbo elu.
Kemgbe Jenụwarị 2021, emepeela ụzọ ise, Cairo, Dammam, Dubai, Jeddah, na Riyadh, site na Doha site na Doha wee banye n'okporo ụzọ ndị ọzọ toro. Rozọ ndị a nabatara nke nyegoro enyemaka dị ukwuu nye ndị mbịambịa bụ Dammam na Doha, na-eru 30% nke ndị mbata mgbochi na ọkara mbụ nke 2017, na Dubai na Doha, 21%. Na mgbakwunye, njikọ ọhụrụ na Seattle, San Francisco, na Abidjan, malitere na Disemba 2020, Jenụwarị 2021, na June 2021 n'otu n'otu.
Majorzọ ndị bụ isi nke gosipụtara ụzọ kachasị sie ike ma e jiri ya tụnyere ọkwa ọrịa na-efe efe (H1 2021 na H1 2019), site na ọnụ ọgụgụ ndị njem rutere Qatar, bụ: Sao Paulo, 137%, Kyiv, nke 53%, Dhaka, ruru 29% na Stockholm, ihe ruru 6.7%. Enweela mmụba ama ama na ikike oche n'etiti Doha na Johannesburg, elu 25%, Nwoke, 21%, na Lahore gbagoro 19%.
Nyocha miri emi nke ikike oche na-egosi na na nkeji iri na ise na-abịanụ, Q3 2021, ikike oche n'etiti Doha na ndị agbata obi ya na Middle East ga-abụ naanị 5.6% na-erughị ọkwa ọrịa na-efe efe na ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, 51.7%, bụ nke e kenyere ya weghachiri ụzọ ndị ọzọ si / Egypt, Saudi Arabia, na UAE.
Isi ihe ikpeazụ, nke nyere Qatar oke Dubai, bụ mmeghachi omume ya na ọrịa ahụ. N'oge oke nke nsogbu COVID-19, ọtụtụ ụzọ na-esi na Doha na-arụ ọrụ, nke rụpụtara na Doha ghọrọ isi iyi maka ụgbọ elu mbughachi - ọkachasị Johannesburg na Montreal.
N'iji tụnyere nkekọrịta ahịa n'oge ọkara mbụ nke 2021, megide ọkara nke mbụ nke 2019, na-ekpughe na Doha emeela ka ọkwalite nke ọma megide Dubai na Abu Dhabi. Ka ọ dị ugbu a, e kewara okporo ụzọ dị 33% Doha, 30% Dubai, 9% Abu Dhabi; na mbu, ọ bụ 21% Doha, 44% Dubai, 13% Abu Dhabi.
Olivier Ponti, VP Insights, ForwardKeys kwuru, sị: “Na-enweghị mgbochi ahụ, nke gbara ume ka e guzobe ụzọ ọhụrụ dị ka atụmatụ iji dochie okporo ụzọ furu efu, ikekwe anyị agaghị ahụ Doha ka ọ na-akwụ ụgwọ gafere Dubai. Yabụ, ọ dị ka ọfụma nke ihe ịga nke ọma Doha bụ, n'ụzọ ihe ọjọọ, kụrụ site na omume ọjọọ nke ndị agbata obi ya. Agbanyeghị, onye kwesiri iburu n'uche na ụgbọ elu gafere Middle East n'oge H1 2021 ka bụ 81% n'okpuru ọkwa ọrịa na-efe efe. Ya mere, ka mgbake ahụ na-agbago ngwa ngwa, foto a nwere ike ịgbanwe nke ukwuu. ”